အသက်​ ၁၀၅ နှစ်​ အထိ ကျန်းမာစွာ​နေထိုင်​သွားတဲ့ ဂျပန်သမား​တော်​ကြီးရဲ့ သက်​​တော်​ရှည်​ရခြင်းလျှို့ဝှက်​ချက်​
အသက်​ ၁၀၅ နှစ်​ အထိ ကျန်းမာစွာ​နေထိုင်​သွားတဲ့ ဂျပန်သမား​တော်​ကြီးရဲ့ သက်​​တော်​ရှည်​ရခြင်းလျှို့ဝှက်​ချက်​ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်​ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဂျပန်​နိုင်​ငံဟာ သူတို့အတွက်​ရတနာတစ်​ဆူလို တန်​ဖိုးထားရတဲ့ သက်​​တော်​ရှည်​သမား​တော်​ ​ဒေါက်​တာ ​Hinohara ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်​။ သူဟာ လူတစ်​​ယောက်​အ​တွက်​ အသက်​ရှည်​၊ အနာမဲ့စွာနဲ့ ​နေထိုင်​နို​င်​မယ့်​နည်းလမ်းကို ​လေ့လာသု​တေသနပြုခဲ့တဲ့ ပညာရှင်​တစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး သူကိုယ်​တိုင်​လည်း […]
ဘယ်ဟာ ဘယ်​​လောက်​သုံးရင်​ မီတာ (၁) ယူနစ်​ ကျမလဲ?
ဘယ်ဟာ ဘယ်​​လောက်​သုံးရင်​ မီတာ (၁) ယူနစ်​ ကျမလဲ? မီတာ ၁ ယူနစ်ဆိုတာ… 1 KWH ၁ ကီလိုဝပ်နာရီ ဆိုလိုတာက တနာရီအကြာကာလမှာ ၁ ကီလိုဝပ်(1000 ၀ပ်) သုံးစွဲလိုက်ရင် ၁ ယူနစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ အလင်းရောင်ရဖို့ မီးသုံးစွဲမှုကို အကြမ်းဖျဉ်း […]